Dambudziko reMvura Rotyirwa Kuunza Zvirwere zveManyoka muShamva
Kuvharwa kwemvura neZINWA pachikoro cheShamva Primary School nemisha yeShamva Gold Mine kwotyirwa kuti kungangokonzeresa kupararira kwemanyoka.
Chikoro cheShamva Primary School chinonzi chiri pasi pemugodhi weShamva Gold Mine, uyo uye chikwereti kuZINWA.
Chikumbiro chaVaChuwe ichi chinotevera kurwara nemanyoka kwakaita vana vechikoro vatanhatu nemusi weChitatu svondo rino, kunyange hazvo chipatara cheShamva chakati manyoka aya haasi echirwere chekorera kana typhoid.
Dambudziko remvura iri rinonzi rakabatawo zvakare musha weveruzhinji weShamva Gold Mine, izvo zvaita kuti vagari vedzimba dzemugodhi uyu vanyore gwaro kudare reparamende vachida kuti ripindire mukuona kuti ZINWA yavhura mvura yakavharwa kubva kutanga kwemwedzi wapera, sezvo iri kodzero yemunhu wese yekuti awane mvura yakachena.
Vagari ava vanoti kuvharwa kwemvura kwave kuita kuti vanhu vashandise mvura inobva munzvimbo dzisina hutano, izvo zviri kuwedzera hurwere kwemanyoka.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZINWA kanawo kubva kumugodhi weShamva Gold Mine.